Inaliti yeCandelo labathengisi kunye neFektri - China Inaliti yoDidi lwabavelisi
Inaliti yenaliti ye-hypodermic alahlwayo yenziwe ngesiphathi senaliti, ityhubhu yenaliti kunye nomkhono okhuselayo. Izinto ezisetyenzisiweyo ziyahlangabezana neemfuno zonyango kwaye zintsholongwane nge-ethylene oxide. Le mveliso i-aseptic kwaye ayinayo ipyrogen. ilungele i-intradermal, subcutaneous, umsipha, inaliti ye-vein, okanye ukukhutshwa kweyeza elisebenzisayo.
Ukucaciswa kweModeli: Ukusuka kwi-0.45mm ukuya kwi-1.2 mm
Umoya wesirinji ongenasiphelo
Idosi yenaliti ihlengahlengiswa ngentambo echanekileyo, kwaye impazamo yedosi ibhetele kunaleyo yesirinji eqhubekayo.
Inkqubo yenaliti engenalutho
Inaliti engenabuhlungu yokuphelisa uxinzelelo lwengqondo lwezigulana;
Technology Itekhnoloji yokusasaza engaphantsi ukuphucula inqanaba lokufakwa kweziyobisi;
Injection Inaliti engenaliti ukunqanda ukonzakala kwenaliti kwabasebenzi bezonyango;
Khusela okusingqongileyo kwaye usombulule ingxaki yokurisayikilisha inkunkuma yezonyango yezixhobo zenaliti zemveli.
Isirinji yesixhobo sokuhambisa
Izinto ezilahliweyo iisirinji zokunyibilika kweziyobisi ziyimveliso esetyenziswa kakhulu ekhaya nakumazwe aphesheya. Kwimisebenzi yokwenyani yeklinikhi, abasebenzi bezonyango kufuneka basebenzise iisirinji ezinkulu kunye neenaliti ezinkulu zenaliti ukuhambisa ulwelo lwamayeza. Izinyibilikisi ezilahlwayo ze-aseptic eziveliswa yinkampani yethu iisirinji zonyango ziye zasetyenziswa ngokubanzi eklinikhi, kwaye izibonelelo zentlalo nezoqoqosho zibalulekile. Isirinji yokunyibilika kweziyobisi iyafuneka ukuze ingabi yityhefu kwaye ibe yinyumba, ke iyaveliswa kwaye yahlanganiswa kwiworkshop ye-100,000 yenqanaba. Imveliso iqulathe isirinji, inaliti yokunyibilikisa inaliti kunye nokhuseleko. Ibhatyi yesirinji kunye nentonga engundoqo yenziwe nge-polypropylene, kwaye ipiston yenziwe ngerabha yendalo. Le mveliso ilungele ukumpompa kunye nokujova iyeza lolwelo xa unyibilikisa amayeza. Ayilungelanga inaliti yomntu ngaphakathi, isitofu esingaphantsi kunye nesitofu.
Isirinji ye-insulin yohlulwe ngokwamandla okuzibiza: 0.5mL, 1mL. Iinaliti zesitofu sezirinji ze-insulin ziyafumaneka kwi-30G, 29G.
Isirinji ye-insulin isekwe kumgaqo we-kinetic, kusetyenziswa ukuphazamiseka okulungele intonga engundoqo kunye nomkhono wangaphandle (kunye nepiston), ngokutsala kunye / okanye ngokunyanzela amandla okuveliswa yintshukumo yesandla, kulangazelelo lweklinikhi yamayeza alulwelo kunye / okanye inaliti amayeza alulwelo, ubukhulu becala ngenaliti yeklinikhi (isigulana sangaphantsi, efakwa ngaphakathi, inaliti yemithambo), impilo kunye nokuthintela ubhubhane, ugonyo, njl.
Isirinji ye-insulin yimveliso eyinyumba eyenzelwe ukuba isetyenziswe kuphela kwaye iyinyumba kangangeminyaka emihlanu. Isirinji ye-insulin kunye nesigulana kukunxibelelana okungafunekiyo, kwaye ixesha lokusebenzisa liphakathi kwemizuzu engama-60, enxibelelana okwethutyana.
Isirinji yokugonya idosi esisigxina
Khubaza ngokuzenzekelayo isirinji
Umsebenzi wokuzibulala uya kuqalwa ngokuzenzekelayo emva kwenaliti, ukuthintela ngokufanelekileyo ukusetyenziswa kwesekondari.
Uyilo lwesakhiwo esikhethekileyo lwenza ukuba isinxibelelanisi esihambisayo siqhube indibano yenaliti yokufaka inaliti ukubuyela umva ngokupheleleyo esingxotyeni, ukuthintela ngokufanelekileyo umngcipheko weentonga zenaliti kubasebenzi bezonyango.
Isirinji ekhubazekayo engasebenziyo engasebenziyo
Inqaku elikhulu elinokukhutshelwa kwisirinji elinokubuyisa inaliti yenaliti iya kutsalwa ibuyele kwisingxobo ukukhusela umngcipheko weentonga zenaliti. Uyilo lwesakhiwo esikhethekileyo lwenza ukuba isinxibelelanisi esihambisayo siqhube indibano yenaliti yokurhola ukurhoxisa ngokupheleleyo esingxotyeni, ukuthintela ngokufanelekileyo umngcipheko weentonga zenaliti kubasebenzi bezonyango.
1.Umgangatho wemveliso ezinzileyo, ulawulo oluzenzekelayo lwemveliso.
2. Isimamisi irabha senziwe ngerabha yendalo, kwaye intonga engundoqo yenziwe ngezinto zokhuselo ze-PP.
3. Ukugqitywa kweenkcukacha kunokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zenaliti yeklinikhi.
4. Bonelela ngephepha leplastiki elithambileyo, izinto ezilungele indalo, kulula ukuzikhupha.